Ahoana no fijerintsika ireo loharanom-baovao ato amin’ny Global Voices #MediaLitMondays · Global Voices teny Malagasy
Ahoana no fijerintsika ireo loharanom-baovao ato amin'ny Global Voices #MediaLitMondays
Voadika ny 17 Jolay 2019 18:35 GMT
Sary avy amin'ny mpisera Flickr janmennens. CC BY-NC-ND 2.0 Photo by Flickr user janmennens. CC BY-NC-ND 2.0
Natsangana ao amin'ny efi-panoratam-baovao virtoaly, tsy mitady tombontsoa ato amin'ny Global Voices ny fahatokisana, ny mangarahara ary ny fahaizana media.
Isaky ny alatsinainy, manomboka androany, dia hizara fomba fijery mikasika ny fomba fitateram-baovao ataon'ny tambajotran'ny Global Voices manana mpandray anjara an-tsitrapo maherin'ny 1 400, tarihin'ny ekipa tonian-dahatsoratra roapolo mahery, avy amin'ny firenena 167 manerantany izahay.
Manampy amin'ny fampiofanana ireo mpandray anjara ato amin'ny Global Voices amin'ny alalan'ireo fomba fitateram-baovao tsy manam-paharoa ny tonian-dahatsoratra. Manana fomba fakana vaovao izahay amin'ny fiheverana fa avy amin'ny olona mihaika ny fahefana sy ny tombondahiny manokana, fa tsy voatery ho avy amin'ny olona ambony ao amin'ny lalatsaran'ny fahefana ny tantara tena manan-danja.
Omen'ny Global Voices lanja [mg] ny fahalianana, ny fahatsorana, ny rariny, ny famindram-po ary ny fifandraisana amin'ny anaran'ny fahatakarana sy ny fisakaizana mihoatra sisintany. Te-hanampy hanangana tontolo iray izay hizarana ny fahefana sy ny fidirana amin'ny fomba mitovy izahay. Ireo no fitsipika mitarika ny fitateram-baovao ataonay.
Miresaka momba ny loharanom-baovao isika amin'ity herinandro ity
Mifanohitra amin'ny fikambanam-baovao hafa, ireo vondrona atao an-jorombala sy zara raha fantatra mahalala tsara ny olan'ny fiarahamonina no loharanom-baovaontsika voalohany, fa tsy ireo mpanao politika, na ireo fampahalalam-baovao ao an-toerana, tsy ny fijery mitongilana eo amin'ireo fikambanam-baovao mahazatra na tandrefana; ary manome sy mampifandray ny loharanombaovaontsika isika isaky ny azo atao izany mba hahafahanao sy ireo mpamaky antsika manana fahefana handinika lalindalina kokoa ny loharanom-baovaontsika ihany koa.
Matoky ny Global Voices fa manan-jo hahazo vaovao betsaka araka izay azo atao ao amin'ny loharanom-baovaontsika ny mpamaky antsika. Voalaza tsara izany ao amin'ny fitsipika arahan'ny famoahan-dahatsoratra.
Iza ireo loharanom-baovaontsika?
Miantehitra amin'ny loharanom-baovao azo itokisana na mahaleotena isika mba hanohanana ny zava-misy.
Ohatra, ao anatin'ity tantara ahitana voambolana 700 navoakantsika ny faran'ny volana Aprily ity: Ny Fahafatesana Manirery an'ilay Lehilahy tena Malaza ao Ethiopia [mg], nampiditra rohy 13 mankany amin'ireo tranonkalam-baovao eo an-toerana ao Ethiopia, ary koa kaonty media sosialy sy sangan'asa navoakan'ny Ethiopiana isika. Miezaka ny mampiditra rohy iray farafahakeliny isaky ny andalana ao amin'ny tantarantsika isika. Ireto ny dimy amin'ireo loharanom-baovao nampidirana rohy tamin'ity tantara ity:
Vaovao fahafatesan'ny [olona] resahantsika ao amin'ny tranonkalam-baovao Ethiopiana eo an-toerana azo itokisana Borkena.com
Vaovao fahafatesan'ny fantsona fahitalavitra nitarika ao Ethiopia ESAT YouTube stream
Tantaran'ny lohahevitra resahintsika avy amin'ny lahatsoratra fanehoan-kevitra momba ireo gadra noho ny fanehoan-kevitra ao Ethiopia nosoratan'ilay manam-pahaizana Ethiopiana Birtukan Mideksa
Fanambarana ny fahafatesana tao amin'ny Facebook avy amin'ny namany Yared Tibebu
Ahoana no hanamarinantsika ireo loharanom-baovao antserasera
Ity indray tari-dalana momba ny fanamarinana sy fanekena ireo loharanom-baovao antserasera. Mandrisika ireo mpanoratra izahay mba hampiditra ny antsipirihany ny fanamarinana ataon'izy ireo amin'ny tati-baovaony, satria inoantsika fa zava-dehibe ny misokatra sy mangarahara amin'ny fomba sy ny antony atokisantsika ny votoaty avy amin'ny mpiserasera. Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy avy amin'ny tari-dalantsika:
Manamarina ny loharanom-baovao: mijery ny loharano niangany voalohany; mikaroka ny tantara antseraseran'ny loharanom-baovao; mifandray amin'ny loharanom-baovao.
Manamarina fa tena orizinaly ny votoaty: fact-check (manamarina ny zava-misy); mikaroka sary mifandraika, mikaroka fantina lahatsoratra; mikaroka ny voambolana fototra; ny fandraisan'ny hafa anjara.
Manamarina fa azo antoka ny fampahalalam-baovao: mikaroka sary amin'ny Google; manamafy ny daty nakàna azy; manamafy ny daty nampidirana azy; mijery ny toetr'andro; mijery ny tahiry lehibe (metadata).
Manamafy ny toerana: manamarina ny fitafy; mijery izay mari-pamantarana hita; mandika ireo famantarana na soratra; mihaino izay fomba fiteny na fitenin-jatovo manokana amin'ny toerana iray, mifandray amin'ny loharanom-baovao.
Manana fanontaniana na fanehoan-kevitra ve ianao momba ny loharanom-baovaonay ao amin'ny Global Voices? Manorata ao amin'ny takelaka fanehoan-kevitra eto ambany.
Aza misaraka aminay amin'ny herinandro manaraka amin'ny fizarana hafa #MediaLitMondays!